ထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူအဆို့ရှင် Valves - 1D;ONE
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ ထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူအဆို့ရှင် Valves.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် 1D;ONE.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် 1D;ONE.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ရည်ရွယ်သည် ထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူအဆို့ရှင် Valves.ကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်ဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခွင့်များကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်။
Panty Liners 1D Auto Parts CO ။ , LTD ကိုအသုံးပြုသည်။ ကုန်သွင်းသူ
1d; Panty Liners 1D Auto Parts Co ။ , Ltd ကိုအသုံးပြုသည်။ ပေးသွင်း, Market က Oriental& ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု - တိုက်ရိုက်ဆိုင်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးရုံးဖွင့်ပါ,ဆလင်ဒါအကှနျ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဆလင်ဒါအပေါက်ထဲတွင်နေရာရဲ့ cylindrical တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်, ထိုဆလင်ဒါဦးခေါင်းကနေ fixed ။ ပစ္စတင်သည်၎င်း၏အတွင်းပိုင်းအပေါက်တွင်အပြန်အလှန်ရွေ့လျားမှုကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ယင်းဆလင်ဒါကှနျ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်နေသောခေါင်းစဉ်:1. Cylinder အလုပ်လုပ်အာကာသဆလင်ဒါခေါင်းနှင့်ပစ္စတင်နှင့်အတူဖွဲ့စည်းသည်။Cylinder ပုံစံပစ္စတင်ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏ 2. Cylinder ကှနျ့ပစ္စတင်ခြမ်းတွန်းကန်အားဖြင့်သမုတ်သောနှင့်ပစ္စတင်များလှုပ်ရှားမှု reciprocating ၏ဦးဆောင်ဖြစ်လာသည်။3. ကသင့်လျော်တဲ့အပူချိန်မှာအလုပ်မလုပ်အောင်စုဝေးကိုယ်တိုင်ကအေးရေဖို့ပစ္စတင်များအပူလွှဲပြောင်းပါ။4. လေဖြတ်သည့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်နှစ်ခုကိုလေကြောင်းလိုင်းများဖြန့်ဖြူးခြင်းအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းကိုပစ္စတင်ကဖွင့်လှစ်ထားသည်။1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ Panty Liners 1D Auto Parts CO ။ , LTD ကိုအသုံးပြုသည်။
အရောင်းအရောင်းရွေးသော Seal Seal Kits လက်ကားရောင်းဝယ်ရေးစက်ရုံများကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းချသောအင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများကို Gasket 1D manutacturing
အဆိုပါ 1d အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ဆန်းသစ်ကိရိယာအစုံဂျပန်လုပ်ပစ္စည်းများတင်သွင်း, ရော်ဘာ gasket, ဆလင်ဒါ Gasket, ရေနံခေါငျးအုံး, အဆို့ရှင်ရေနံတံဆိပျ, လက်ကိုင်ရှေ့နှင့်နောက်ရေနံတံဆိပျ, Camshaft ရေနံတံဆိပျ, နှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းတင်းကြပ်စွာအရည်အသွေးမြင့်အသုံးပြုမှုကိုသေချာစေရန်စမ်းသပ်ပြီးနေကြသည်။